Ahoana ny fomba hanaovana fanaraha-maso SEO feno | Martech Zone
Tamin'ity herinandro lasa ity, nisy mpiara-miasa amiko nilaza fa manana mpanjifa toa azy izy niraikitra amin'ny filaharana ary tadiaviny ny Fanaraha-maso SEO ny tranokala hijerena raha misy olana.
Nandritra ny taona maro dia nivoatra ny motera fikarohana ka nahatonga ireo fitaovana fanaraha-maso tranokala taloha tsy tena manampy intsony. Raha ny marina, 8 taona lasa izay no nahasosotra ahy ireo masoivohon'ny fikarohana sy ny mpanolotsaina SEO dia maty. Na dia clickbait aza ilay lahatsoratra, dia mijoro eo akaikin'ny saiko mialoha aho. Ny motera fikarohana dia tena maotera fitondran-tena, fa tsy ny crawler fotsiny izay manadihady ireo sombin-kaba amin'ny tranokalanao.
Miankina amin'ny lafiny efatra lehibe ny fahitana ny motera.
Ny atiny - ny fahaizanao mandamina, manolotra ary manatsara ny atiny sy manatsara ny rafitra fitantanana atiny ho an'ny milina fikarohana mandady sy mamantatra ny momba ny tranokalanao.
Ny fahefanao - hatraiza ny fivoaran'ny sehatr'asa na orinasanao amin'ny tranokala hafa mifandraika izay ahafahan'ny motera fikarohana mandevona sy manaiky ny fahatokisanao sy ny fahefana anananao.
Ireo mpifaninana aminao - ianao ihany no hanana laharam-pahamehana ary mamela anao hifaninana ny fifaninanana, noho izany ny fahatakarana izay ataon'ny mpifaninana izay mitazona azy ireo ambony dia manadanja ny fahombiazanao.
Ireo mpitsidika anao - Ny valin'ny motera fikarohana dia mifanaraka amin'ny fihetsiky ny mpitsidika anao. Noho izany, mila manome paikady maharesy lahatra ianao amin'ny fizarana, fampiroboroboana ary ho an'ireo mpitsidika mba hatolotra anao hatrany ny valiny. Mety hiankina amin'ny toerana, fitaovana, fizaran-taona sns sns izany. Ny fanatsarana ny fitondran-tenan'olombelona dia hiteraka fahitana fikarohana bebe kokoa.
Araka ny hitanao, midika izany fa tsy maintsy manao fikarohana an-taonina ianao amin'ny fanaovana fanaraha-maso… manomboka amin'ny kaody sy ny fahombiazan'ny onjampeo ka hatramin'ny fikarohana mifaninana, ny fandalinana am-pitiavana, ny fandraisam-peo sy ny fijerena ny fihetsiky ny mpitsidika eo amin'ny pejy.
Rehefa manao fanaraha-maso SEO ny ankamaroan'ny manam-pahaizana momba ny fikarohana dia mahalana izy ireo no mampiditra ireo lafin-javatra rehetra ireo amin'ny fanamarinana ankapobeny. Ny ankamaroany dia miresaka fotsiny amin'ny fanaovana fanaraha-maso SEO fototra momba ny olana eo an-toerana.
Fanaraha-maso dia eo noho eo, SEO tsy
Rehefa mamaritra ny SEO amin'ny mpanjifa aho dia matetika no mizara ny fampitahana ny sambo iray miampita ny ranomasina. Na dia mety ao anaty fepetra fampandehanana tonga lafatra aza ny sambo ary mandeha amin'ny lala-mahitsy, ny olana dia misy sambo hafa mety ho haingana sy tsara kokoa… ary ny onja sy ny rivotry ny algorithma dia mety mankasitraka azy ireo.
Ny fanaraha-maso SEO dia naka sary fohy ara-potoana mba hampisehoana aminao ny fahaizanao, ny fomba fanatanterahanao ireo mpifaninana aminao, ary ny fomba fanatanterahanao ny momba ny algorithman'ny motera fikarohana. Mba hiasa ny fanaraha-maso dia mila mihazakazaka hatrany ianao ary manara-maso ny zava-bitan'ny fonenanao… fa tsy mieritreritra fotsiny hoe napetraka io ary hadino ny fomba fiasa.
Fanaraha-maso tranokala SE laharana
Fitaovana iray any izay hanao an'ity fizahana haingana anao ity dia Fitaovana fanaraha-maso SE Rankings. Fitaovana fanaraha-maso feno izay azo alamina ary manome anao ny tatitra voalahatra hanampy anao hanatsara sy hanatsara ny fahitana sy ny toeran'ny motera fikarohana anao.
The Fanaraha-maso laharana SE manombatombana mifanohitra amin'ny masontsivana fanalahidin'ny milina fikarohana rehetra:
Fahadisoana ara-teknika - Hamarino tsara fa napetraka araka ny tokony ho izy ny mari-pamantarana canonika sy hreflang anao, zahao ireo toe-javatra fanodinana ary mahita pejy duplicate. Ambonin'izany, diniho ny pejy misy kaody 3xx, 4xx, ary 5xx, ary koa ireo nosakanan'ny robots.txt na nasiana marika tag noindex.
Meta Tags sy lohateny - Mitadiava pejy misy tag tsy misy na duplicate. Ny fanitsiana ny lohateny sy ny famaritana ny halavan'ny tag dia mety hamela anao hamantatra ireo tag izay lava loatra na fohy loatra.
Hafainganana amin'ny famoahana tranokala - Zahao hoe haingana be ny tranokala mameno ny finday sy ny Internet ary, raha maharitra ela, dia mahazo tolo-kevitr'i Google momba ny fomba hanatsarana azy.
Image Analysis - Sakano ny sary rehetra amin'ny tranokala ary zahao raha misy tsy hita tag na misy lesoka 404. Fanampin'izany, fantaro raha misy sary lehibe loatra ary, vokatr'izany, miadana ny hafainganam-pandehan'ny tranokala.
Rohy anatiny - Jereo hoe firy ny rohy anatiny misy ao amin'ny tranokala, ny loharano, ary ny pejy itodiana, ary koa raha misy na tsia ny tag nofollow na tsia. Ny fahafantarana ny fomba fanaparitahana rohy anatiny manerana ny tranokala dia hanampy anao hanatsara azy.
Ny fitaovana dia tsy mandady ny tranokalanao fotsiny, fa mampiditra ny angona an-tserasera sy ny Google Search console amin'ny fanaraha-maso ankapobeny hanomezana anao tatitra mazava momba ny tranokalanao, tsara ny filaharany amin'ireo teny lakile tianao halahatra, ary koa toy ny fomba fampisehoana ataonao amin'ireo mpifaninana aminao.
SE laharana Ny sehatra dia feno ary mamela ny tompona tranokala hifehy ny lafiny rehetra amin'ny mandady ary koa ny Whitelabel ny tatitra raha consultant na masoivoho SEO ianao:
Ny tatitra sy recheck mandeha ho azy dia mamela anao hitazona ny tranokalanao ho dinihina tsy tapaka.
Ny botan'ny SE Rankings dia mety tsy miraharaha ireo torolàlana avy amin'ny robots.txt, manaraka ny fikirana URL, na manaraka fotsiny ny fitsipikao manokana.
Ataovy miavaka ny tatitra momba ny fanaraha-maso ny tranonkalanao: ampio ny sary famantarana, manorata hevitra ary manaova azy anao araka izay azo atao.
Afaka mamaritra izay tokony horaisina ho lesoka ianao.
Manomboha andrana maimaimpoana mandritra ny 14 andro amin'ny filaharana SE
Misintona ohatra PDF tatitra:
Alexa dia nizara ity infographic ity, Torolàlana momba ny fanaraha-maso SEO teknika ho an'ny vao manomboka, izay manondro olana 21 amin'ny sokajy 10 - izany rehetra izany dia ho hitanao ao amin'ny fitaovan'ny SEO Ranking Audit:
Fampahafantarana: Mampiasa ny Laharana SE rohy mpiara-miasa ato amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: Fanaraha-maso Alexa seoAmazonamazon alexafanaraha-maso fifaninananafamakafakana teny lakileKeyword fitaovanaaudit auditfamakafakana haingana ny pejyfanaraha-maso ny tranonkala pdfkaontin'ny motera fikarohanaaudit amin'ny fanatsarana ny motera fikarohanaseo fanaraha-masofanaraha-maso ny tranokala
MarketerHire: aiza no hanakaramana mpivarotra tsy miankina amin'ny varotra
serivisy fanaraha-maso tranonkala
28 Jiona 2015 à 8:22
Fitaovana tranonkala fampahafantarana lehibe. Ity dia fandrosoana indrindra ho an'ireo vao manomboka.